Chitendero & Kunamata Ngirozi & Zvishamiso
Kufananidza kwemaumbirwo mune zvitsvene zve geometry nekurota kunoshamisa
Maumbirwo emakemikari mumarota ako ane kukosha kwemweya nokuti chimiro chimwe nechimwe chine zvarinoreva izvo Mwari kana vatumwa vake, vatumwa , vangashandise sezviratidzo muzvishamiso zvekutora mashoko. Mwari akasika zvisikwa zvake zvose - zvose kubva kuDNA yevanhu kusvika kumakristani - nemaumbirwo sezvivako zvekuvaka. Nzira dzakanakisisa dzaMwari dzegomorometri dzinoronga zvose zvakasikwa, uye zviratidzo zvavo zvinoratidza kuti zvose zvakabatanidzwa senhengo inokosha yehuwandu hwakazara.
Nheyo dzemagwaro matsvene geometry dzinotaura kuti Musiki anogara achitaura kuburikidza nemhando muzvisikwa zvake. Mukurota kwako, maumbirwo (akadai semakwikwi, zvikwereti, kana zvitatu) zvinogona kureva hukama hwako hwepamwe chete navo kana kuti zvisikwa zvepasi rose zveiyo maumbirwo. Heino nzira yekududzira zvinoreva maumbirwo anoonekwa mumaroto ako:
Cherechedza Ndeupi Mufananidzo Wakagadzirirwa Zvaunonyanya Kufarira
Kana uchinge wapona mushure mekumuka, nyora zvakawandisa iwe zvaunogona kuyeuka nezvehuroto hwawakaona. Kana imwe chimiro ichimirira mune imwe yezviroto zvako, iyo chimiro chinogona kunge chiri chiratidzo chemashoko ekurota kwauri. Pane chimwe chinhu chakakosha here chinotora basa rinokosha mukurota kwako? Zvichida wakarota pamusoro pechikamu chetatu chechizi, somuenzaniso, uye kushamisika nei. Wakaona chimiro chechimiro chakafanana chinoratidzika pane zvinhu zvakasiyana kubva muchiroto chako here? Zvichida mutsara wemhepo yakabuda muhope dzako nenzira dzakasiyana-siyana, kubva pamapine pine kusvika kune zvishoma.
Nyengetera pamusoro pemhando ipi zvayo kana maumbirwo awakanyatsotarisa iwe panguva yako yekurota, uchikumbira Mwari nengirozi dzake kuti utungamirire iwe waunoda kuti utsanangurire zvakajeka zvinoreva.
Funga nezveBy Personal Connections uye Universal Symbolic Meanings
Fungisisa nezvemashoko awakanyora pamusoro pehuroto rimwe nerimwe, uchizvibvunza iwe ushamwari hupi hune humwe humwe humwe huripo murota.
Chero hupi hunobatanidza humwe hunoita hupenyu hwako hunokurudzira hunogona kuita semanzwiro kune zvaanoreva mukurota kwako. Maumbirwo mumarota ako anewo zvisizvo zvekufananidzira zvakagadzirwa munyika yose yekare uye kupfuura miganhu yemitemo.
Mumwe mukurumbira wepfungwa uye anotsvaga kurota Carl Jung aidavira kuti kunyange kana maitiro achionekwa muchiroto asingaoneki seanonzwisisa, ane chinangwa chikuru. "Mune mhirizhonga yose, kune denga rose, mumatambudziko ose kuvhara," akambotaura.
Salvador Dali, mumwe wevanyori venyika vanozivikanwa zvikuru surrealist, akati zvimiro mumaroto ake kazhinji zvakamufuridzira zvose zvakasikwa uye zvekunamata. Ichokwadi, Dali akati, Mwari akataura naye zvakanyanyisa mukurota kwake kuti kurota kwacho kwaiita sechinyanya kukosha kudarika hupenyu hwake hwekumuka. "Rimwe zuva zvichatofanira kubvumirwa zviri pamutemo kuti izvo zvatakadzidzisa chokwadi ndechokunyengera kukuru kupfuura nyika yezviroto," akadaro Dali.
Mwari kana vatumwa vanogona kutaurira hukuru hwemashoko ehuMwari kwauri nenzira yehumi kana vachidavira kuti iwe unoteerera maumbirwo mumarota ako. Somuenzaniso, kana ukacherechedza mazamu akawanda muhope dzako uye iwe unotarisana nechisarudzo chakakura muupenyu hwako iye zvino, rutsanga (mawindo emasuo) inogona kuva nzira yaMwari yekukukurudzira kutsvaka uchenjeri pamusoro pekuita zvakanakisisa chisarudzo (chirevo chemufananidzo, iro suo rekufamba naro).
Kana iwe unogona kuona nyeredzi muchiroto panguva iyo iwe unonyanya kuda kukurudzirwa nokuti wakakundikana pane chimwe chinhu wawaedza kuita. Nyeredzi-chiratidzo chekubudirira-inogona kuva nzira yaMwari yekukurukurirana kuti iwe unogona kugara uine chivimbo mukuda kwake kusina mubvunzo kwauri.
Heino mhedziso shoma yezvinoreva kushandiswa kwemaumbirwo muhope:
nekusingaperi, hukama, kubatana
kugadzikana, kurongeka, kusuruvara, ngirozi huru dzemativi mana
zvepabonde, kukura mumweya, utatu hwechiKristu
simba, zvinetso, chiKristu
kusimba, kushanduka, Islam
kubatana, kufemerwa, kuzvipira
Quint Inspiring About Angels uye Rudo rwavo
Mazano Anokurumbira Pamusoro peMutumwa Akanaka
Mazita Akakurumbira Pamusoro pe Guardian Ngirozi
Iyo Guardian Ngirozi Inogona Kukubatsira Iwe Kunyora Dota Yako
Iyo Guardian Ngirozi Inogona Kukutungamirirai muna Lucid Dreams
Roses Dzvene: Zvokunamata Symbolism yeRose
Nengi Ngirozi Nemiti Zvinogona Kuvandudza Mweya Wako
Guardian Angels muHinduism
Top 10 Nziyo Dzakakurumbira Nevengirozi
Chii Chikafu Chikafu?
Dhidhiro Tsanangudzo uye Mienzaniso muSayenzi
Chikamu cheSvondo chakasununguka
20 yeMufaro, Weirdest Senior Pictures Yakatorwa
Pamusoro 10 Conservative Educational and Advocacy Web Sites
Arbor Day Day neHurumende uye Zuva
Ko Gorozi Inodzidza Mathodhi?
Nguva Yakasakara 6th & 7th Ye 'Star Wars: The Clone Wars'
Kudzidza Nhamba dzechinomwe paGitare
Nzira Yokugadzirisa "Dure" (Kuzopedzisira)
Frank Furness, Muumbi wePhililadelphia
Mwedzi Mutsva Wenyaya Yekare - African American Inventors
"Pierre Menard, Munyori we 'Quixote'" Yokudzidza
10 Tariro dzeBhaibheri dzeTariro yeGore Idzva
Handy Mnemonic Devices Kubatsira Kuyeuka Zvinhu Zvekuita Kwemhuri
Nzira Yokugadzirisa Nayo "Avancer" (Kutanga)
Libra Murudo: Zodiac Compatibility
Kusvinura Chakavanzika Chekudzidzira Mazita echiFrench
5 Zvinhu Zvaunoda Kuziva NezveGoo Castle
Iyi Mifananidzo Inonakidza Ichaita Kuti Iwe Uchiti "NOPE!"
Ko Stegosaurus Akawanikwa Sei?